ka miisa 104 ny alika novonoina nandritra izany, izay hita nirenireny manodidina ny bazary. Izao no natao, hoy izy ireo, dia mba ho fiarovana amin'ny haromontana ary mbola hitohy ny asa. Maro ny soso-kevitra mivoaka eo anatrehan’ity zavatra natao tany Madirovalo ity, fa tokony hanaovana tahaka izao ihany koa eto Antananarivo. Ho an’ny Renivohitr’I Madagasikara dia tafiditra ao anatin’ny Fitsipika mifehy ny ara-pahasalamana sy ara-pidiovana (CMH) izay niteraka adihevitra goavana ny fampandoavana lamandy ho an’ireo alika mivovo manakorontana manakotaba ny fiarahamonina. Mety ho manampy amin’ny fandriampahalemana anefa ireny, fa ny tena angatahan’ny olona dia hamonoana ireo alike mpirenireny fotsiny mandoto tanàna.